Ny fanovana endrika dia manemotra ny fanombohana ny Galaxy Note 9 Androidsis
Ny fahitana fa ny fivarotana ny Galaxy S9 dia tsy mifanaraka amin'ny andrasan'ny marika, Samsung dia nanapa-kevitra ny hampandroso ny fandefasana ny Galaxy Note 9. Noho io antony io dia halefa amin'ny volana jolay ny avo lenta vaovao ary ny 29 jolay no daty voafidy. Na dia toa misy fiovana vaovao aza ny drafitra. Hatramin'ny nanombohana ny avo indrindra dia hahemotra tapa-bolana.
Ny anton'izany dia ny fiovan'ny endrika finday. Fiovana minitra farany, saingy ilaina, noho izany dia hahemotra mandritra ny tapa-bolana ity Galaxy Note 9 ity. Ka hamely ireo magazay amin'ny tapaky ny volana aogositra io. Raha mandeha mifanaraka amin'ny drafitra ny zava-drehetra.
Inona no fanovana famolavolana resahintsika? Toa handeha izany ahenao ny hatevin'ny vera eo amin'ny efijery avo lenta Samsung. Ity dia fihenam-bidy kely indrindra, 0,5 mm monja, araka ny nambaran'ny media maro. Saingy fiovana lehibe ho an'ny fampisehoana tsara kokoa sy fanandraman-javatra tsaratsara kokoa ho an'ny mpampiasa izany.
Ity fanovana ity dia tsy maintsy tanterahina amin'ny singa rehetra ao amin'ny Galaxy Note 9 amin'izao fotoana izao amin'ny famokarana. Noho izany, ny fanombohana ny avo indrindra dia hahemotra tapa-bolana. Fotoana ilaina hanatanterahana ny fanovana ary ny telefaona rehetra dia tsara toerana.
Amin'izao fotoana izao Tsy nisy daty voafaritra mazava tamin'ny volana aogositra tamin'ny fahatongavan'i Galaxy Note 9. Ka tsy maintsy miandry isika mandra-pahatapitry ny famokarana na efa novonoina ny fanovana raha te hahalala bebe kokoa. Ny tapaky ny volana aogositra no toa mety.
Amin'ity paikadin'ny fandrosoana ity, Manantena i Samsung fa hamidy tsara kokoa ity Galaxy Note 9 ity. Ka ny fivarotana diso fanantenana ananan'ny Galaxy S9, izay tsy nahatratra ny andrasan'ny orinasa koreana, dia resy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny fanombohana Galaxy Note 9 dia hahemotra mandritra ny tapa-bolana
Afisy tafaporitsaka nanamafy ny fanombohana ny Samsung Galaxy A9 Star & A9 Star Lite